अपार्टमेन्ट स्टूडियो कोठा - आधुनिक आवास को सबै भन्दा सामान्य प्रकार को एक। तिनीहरूले स्वीकार्य मूल्यहरु, यो एक व्यक्ति वा जोडीहरू लागि पर्याप्त छ। र ठीक कार्यात्मक क्षेत्र मा कोठा ठाउँ मा वितरण भने, ठाउँ र बेडरूम जस्ता घनिष्ठ विवरण र मित्र बनाउन को लागि एक साझा जीवित कोठा दिइएको हुन सकेन।
बेडरूम र जीवित कोठा कोठा को Zoning भित्री डिजाइन केही नियमहरू विषय हो। र तिनीहरूलाई को पहिलो भन्छन्: व्यक्तिगत स्पेस inviolable हुनुपर्छ। त्यसैले, कोठा को विपरीत पक्ष मा, अगाडि ढोका टाढा सुतिरहेको क्षेत्र ठाँउ। कोठा केवल एक विन्डो छ भने, यो बेडरूम यसलाई पूरा गर्न आवश्यक छ। सम्झना, zoning कोठा बेडरूम र जीवित कोठा मुख्यतया यसलाई मा सहज जीवित खातिर छ। प्रकाश स्रोत, बाहिरी संसारलाई पहुँच, रूपमा विन्डो सकारात्मक मनोवैज्ञानिक राज्य प्रदान गर्दछ। यो गुफा मात्र हल्का बल्ब संग, मान्छे, असहज अप्ठ्यारो, थिचोमिचोमा परेका महसुस हुनेछ, प्रकाश र हावा बिना छ। तर बेडरूम र बैठक कोठा गर्न zoning कोठा "कोठा" दिन कोठा को मुख्य भाग अनुमति दिन्छ। सो क्षेत्र धेरै सानो आकार हुन सक्छ - लामो यो सुविधाजनक थियो।
कसरी यो ठाउँ सुरक्षित गर्न सम्भव छ? पहिले, को तह पर्खाल बोर्ड टेबल। झुकन एक आधा - प्रबन्ध तालिका मा दुई। अर्को - पहिले नै चार, आदि पर्खालहरु साथ, खाट, ऐना छेउमा - दोश्रो, एक बेडरूम र बैठक कोठा मा कोठा को zoning सामान्य मंत्रिमंडलों र अन्य फर्नीचर विभिन्न पारंपरिक स्लाइड समतल सट्टा सुझाव। तेस्रो, यो जो बिछ्यौना मा जोडेको गर्न सकिन्छ, सुत्न एउटा सोफा चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। उहाँले, पनि, जोडेको-decomposed हुनुपर्छ। र यो कैस्टर छ धेरै मनमोहक छ। को कुर्सियों लागि जाँदा, छनौट आकार मा सानो। र पनि पाङ्ग्रा संग, यो आवश्यक भएमा सार्न सुविधाजनक थियो। टिभी र कम्प्युटरको लागि जस्तै, पहिलो पर्खाल मा झुन्डियो। तपाईं सुत्न जानुअघि यो हेर्न अभिप्राय? त्यसपछि क्षेत्र बाँकी, र जीवित कोठा रूपमा प्रयोग गर्न सुविधाजनक थियो कि एक स्थान रोज्नुहोस्। र एक ल्यापटप खरीद - statsionarnika एउटा ठाउँ खोज्न छैन। के तपाईंले कहिल्यै फर्नीचर-ट्रांसफर्मर बारेमा विचार? अक्सर, zoning जीवित कोठा बेडरूम धेरै यस्ता भित्री जित्यो छन्। छैन कैबिनेट राति हुँदा एक ओछ्यानमा मा उत्तेजित गर्दछ र विपरित, सुविधाजनक छ? र त तपाईं मंत्रिमंडलों मात्र गर्न र सोफे, तर पनि अन्य उपयोगी फर्नीचर आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्तमा, फर्श, catwalks, जो एक सुत्ने ठाउँ एक गद्दा बाहिर रोल देखि - पनि ठूलो विकल्प छ!
otcherknut व्यक्तिगत स्पेस रूपमा
नेत्रहीन दुई क्षेत्रमा भेद गर्न, यो पनि धेरै सहज र सुन्दर सामान पाउनुहुनेछ। यो र स्क्रीन, स्क्रीन, पुल-डाउन अंधा को एक किसिम - भौतिक बनेको, मोती, बांस लाठी, आदि जीवित-बेडरूम zoning - - विशिष्ट उद्देश्य अलग्गै तिनीहरूले शिष्ट कोठा बनाउन एक निश्चित स्वाद दिने, एक मुड सिर्जना गर्ने, थप र समारोह सजावट प्रदर्शन। यदि हामी इन्डोर बिरुवाहरु प्रेम - सजावटी vases को एक किसिम संग स्ट्यान्ड-पर्खाल आफ्नो अंतरंग, निजी क्षेत्र को prying आँखाबाट लुकाउनुहोस्। र लघु मा यस्तो जाडो बगैचा बाट कोठा नै ठूलो लाभ। फर्नीचर नियुक्ति विशेष तरिकामा पनि, उचित योगदान स्पेस संगठन। यदि सोफा जो निद्रामा मा, जीवित कोठा मा फिर्ता बारी, आफ्नो फिर्ता क्षेत्र सीमाहरु को भूमिका पूरा हुनेछ। खैर, अर्डर गर्न फर्नीचर को निर्माण मा आफैलाई एक ओछ्यानमा गर्छन, जो पछाडि पूर्ण अलग, एउटै समय र दराज छ को को भित्री परिसर। एउटै समारोह केस-ट्रांसफर्मर प्रदर्शन गर्न सक्छन्, आदि दिखेगा स्टाइलिश र विविध आला डिजाइन, केही ओछ्यानमा लुकाउनुहोस्। तपाईं अझै पनि एक्लै क्षेत्र विभाजित, कोठा: तर बिर्सन छैन। तसर्थ, रंग र विस्तार, आदि को एक वातावरणमा सद्भाव सिद्धान्त पालन
प्रकाश - यो भित्री संग विभिन्न समस्या सुलझाने मा राम्रो सहायक। अतिथि को माथिल्लो भाग को लागि एक उज्ज्वल प्रकाश छोडेर संवेदी वा spotlights, पर्खाल वा तालिका दीपक को बेडरूम सीमा। हुनत त्यहाँ एक वा स्थिति आधारमा ती सबै सहित धेरै हल्का स्रोतहरू राख्न पनि बेहतर छ।
प्रोभेन्स को शैली मा वालपेपर - आफ्नो घर को देहाती सान्त्वना
भान्सा मा एप्रन: सेरेमिक टाइल्स को फाइदा र यसको स्थापना को subtleties
के भान्सा को लागि एक मोहरा चयन गर्न राम्रो छ? भौतिक सुझावहरूको
को भित्री मा कृत्रिम पत्थर। कृत्रिम पत्थर संग भित्री सजाय
भरी चिकन खुट्टा: एक नुस्खा
कार मा एयर ब्रस। एयर ब्रस Vinyl कार कसरी बनाउने
कन्टिनेन्टल महल4होटल (ग्रीस / Kos): सेवाहरू, फोटो र समीक्षा
काम Itinerant प्रकृति: लाभ र बेफाइदा
विधि र वैज्ञानिक ज्ञान को प्रकारका